Dowlada oo sheegtay inuu Farmaajo yahay Madaxweynaha dalka inta laga dooranayo Madaxweyne kale -
Home News Dowlada oo sheegtay inuu Farmaajo yahay Madaxweynaha dalka inta laga dooranayo Madaxweyne...
Dowlada oo sheegtay inuu Farmaajo yahay Madaxweynaha dalka inta laga dooranayo Madaxweyne kale
Afhayeen xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Nuur ayaa ku tilmaamay mid sharci daro ah hadalada ka soo yeeray xubnaha mucaaradka.
Mr Macalimu ayaa farta ku fiiqay in ilaa laga helayo madaxwayne iyo baarlamaan la soo doortay madaxda joogta ay xilka sii hayn doonaan.
“Wixii kale ee wadahadal ah dowladda diyaar ayay u tahay inay wadahadal la gasho cid walba, tanaasulaad badan oo is xig-xiga ayay madaxdu sameysay, soomaalida waxay dhahdaa xujo ma falantee xaajo falanta, marka meeshaas xaajo ma oolin laakiin had iyo jeer dowladdu diyaar ayay u tahay,” ayuu yiri mr Maclimu.
Muddo xileedka Mxaamed Cabdulahi Framaajo ayaa dhammaaday islamarkana ma jiro heshiis siyaasadeed oo ilaa iyo imika laga gaaray oo arrimaha doorashada.
Previous articleTirada dadka uu soo ridanayo dalka Soomaaliya cudurka Covid-19 oo korortay
Next articleGolaha Ammaanka oo maanta kulan ka yeelanaya qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya